uruka xaragada alashabaab iyo ahlu sunah oo guula kala sheegtey – Puntland Voice
May 4, 2010 12:27 pm Views: 30
Ururka Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin iyo Ahlu suna Guulo ka kala sheegtay Dagaalo culus oo ilaa xalay ku dhexmarayay Degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag.
Muqdisho (AB):-Saraakiil u kala hadashay Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin iyo Ahlu suna ayaa guulo ka kala sheegtay dagaaladii shalay galab ilaa xalay ka dhacay Muqdisho kaasoo dhexmaray ciidamo labadaasi dhinac ka kala tirsan.
Af-hayeenka Ahlu suna Sheekh C/laahi C/raxmaan Abuu Yuusuf Al-qaadii ayaa saxaafada u sheegay inay guul ka gaareen dagaaladii ilaa xalay ay kula jireen dhanka Xarakada Alshabaab islamarkaana iyaga la soo weeraray.
"waxaan dilnay Saraakiil Ajaanib ah oo ka bar bar dagaalameysay kooxda Shabaab iyo waliba kuwo Soomaali ah" ayuu yiri Abuu Yuusuf Alqaadii
Waxaa kale uu sheegay Abuu Qaadii in Ciidamadoodu gaareen ilaa suuqa Bakaaraha afaafkiisa hore islamarkaana ay Saaka iyagu ku sugan yihiin meeshii markii hore lagu soo weeraray ee nawaaxiga Biyo dageenka.
Dhanka Xarakada Alshabaab waxaa isna saxaafada la hadlay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ee dhanka Alshabaab Sheekh Cali maxamed Xuseen kaasoo isna sheegay inauy guulo waa weyn ka gaareen dagaalkii ilaa xalay ay kula jireen Ciidamada Ahlu suna.
Sheekh Cali waxaa uu tilmaamay in weeraraka ay iyaga qaadeen markii ay ka war heleen in iyaga la soo weerari rabay.
"dagaalka anaga ayaa qaadnay waxaana ka hortagnay weerar suuqa Bakaaraha lagu soo qaadi rabay" ayuu yiri Sheekh Cali Maxamed Xuseen.
Si kasaba waxaa saaka degan dhamaan goobihii shalay galab ilaa xalay lagu dagaalamayay waxaana labada ciidan kala joogeen meelihii hore ay u kala joogeen.